Ny Teny Malagasy : Fanentanana ny Fon’ny Vahoaka amin’ny Fampandrosoana (Tapany I) – Blaogin'i Voniary
Lahateny nataon’i Rado tetsy amin’ny Akademia Malagasy tetsy Tsimbazaza, ny 25 Jona 1994, indray no entina amintsika anio. Samia àry maka izay tandrify azy avy :
Izany no ni-convoquer-na antsika exprès amin’ity réunion de sensibilisation ity. Isika rehetra sans exception izany no samy hilaza izay point de vue-ny avy, vis-à-vis de ce projet. Tout au moins, izay mba suggestion na solution intermédiaire sy adéquate any an-tsainareo any.
Misokatra àry izao ny débat sy ny discussion ka tout le monde peut prendre la parole. Merci ! »
Nangina eran’ny trano. Azontsika an-tsaina avy hatrany fa tsy naharay afa-tsy teny vitsy tamin’ny kabarin’Andriamatoa ireto Tantsaha sakaizany. Ary tsy nahagaga koa raha tsy nanan-kolazaina fa nifampijerijery sy nifampiandriandry fotsiny.
Nisafoaka ilay tovolahy mpandahateny, ka niriatra nanao hoe : « izao ihany ilay mampi-décevoir ny technicien aminareo, fa tsy capable hi-saisir ny occasion profitable sy favorable tahaka itony, » sady lasa izy nandeha.
Fatiantoka voalohany : tsy tafita ilay hevitra sy fikasana tsara natolotr’Andriamatoa, satria tsy nisy azon’ny tantsaha sakaizany izay tiany holazaina.
Fatiantoka faharoa : kivy ilay manampahaizana satria noraisiny ho fahalainan-kandroso ny fanginan’ireto tanora, tsy nanan-kolazaina tamin’izay hevitra narosony.
fahaleovan-tena, fampandrosoana, rado akademia malagasy, rado mpanoratra, teny gasy, teny malagasy, tononkalo rado